GADZIRISA ZVISINGABVIRI BHUTSU VHORIYAMU WINDOWS 10 BHURUU SCREEN STOP: 0X000000ED - WINDOWS 10
Gadzirisa zvisingabviri bhutsu vhoriyamu windows 10 Bhuruu Screen STOP: 0x000000ED
Kuwana UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME BSOD Mushure mekuisa Windows 10 Gumiguru 2018 kugadzirisa? Kana kunetsekana ne 'Isingaverengeki Boot Vhoriyamu' kukanganisa, izvo zvinokutadzisa iwe kupinda mukati ku Windows 10? Iko kukanganisa Windows 10 zvisingaverengeki bhuti vhoriyamu BSOD Kanganiso STOP: 0x000000ED inowanzoitika kana Windows isingakwanise kuwana vhoriyamu ine mafaera ebhutsu. Izvo zvinoitika kana paine dambudziko muhurongwa hwekutyaira dhiraivhu kana muchikamu umo paiswa Windows. Pro Tip: (Kune zvikonzero zvakawanda kwazvo zveHard disk yako huori uye mazhinji e ari junk software yekumisikidza, mavairasi, akadhinda data.).
Zviri Mukati ratidza 1 Chii chinokonzeresa unmountable bhuti vhoriyamu windows windows piri Gadzirisa isingadzikike bhuti vhoriyamu 2.1 Kugadzirisa otomatiki 2.2 Vaka zvakare Master Boot Record (MBR) 2.3 Tarisa Disk Drive Zvikanganiso 2.4 Bhutsu windows Mune yakachengeteka nzira
Izvo zvinonyanya kuitika mushure me windows 10 kukwidziridzwa, Sevazhinji vashandisi vanotaura nyaya iyi pa Microsoft foramu se:
Pandakavhura PC yangu, iyo Windows 10 logo screen rakabuda sezvaringaite, asi denderedzwa remadota rakaramba riripo kwenguva yakareba, uye ipapo bhuruu rebhuruu rakaonekwa richiti 'PC yako yakapinda muchinetso, uye inoda kutangazve ”. Pasi pechidzitiro ichocho, kodhi yekumira yakanga yati ' ZVISIMBIKWA BHUKU Vhorumu '.
Chii chinokonzeresa unmountable bhuti vhoriyamu windows windows
Pane chikonzero chakasiyana siyana chinokanganisa kukanganisa UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Yayo inokonzerwa neyakajairika Hardware kana zvisizvo zvakagadziriswa Hardware marongero. Izvo zvinogona zvakare kuitika kana boot zvine hukama mafaira akanganiswa. yakakanganisika faira sisitimu iyo yakundikana kukwira kana iyo yekutanga yekuisa / kuburitsa system (BIOS) marongero akagadzirirwa kumanikidza anokurumidza UDMA modes.
Izvo zvinogona zvakare kuitika kana paine dambudziko muhurongwa hard drive kana muchikamu umo Windows yako yakaiswa. Kana yechitatu-bato software uye masevhisi uye nezvimwe. Chero chingave chikonzero pano mamwe mhinduro iwe aunogona kuisa kugadzirisa zvisingaverengeki bhuti vhoriyamu pane windows 10.
Gadzirisa isingadzikike bhuti vhoriyamu
Chekutanga bvisa zvese zvekunze zvishandiso, izvo zvinosanganisira purinda, scanner, yekunze HDD nezvimwe uye tangazve windows. Izvi zvichagadzirisa dambudziko kana chero Hardware & software kupokana kuchikonzera nyaya.
Kana iwe uri kuwana iyi yekukanganisa meseji UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME kazhinji kunyangwe mushure mekuyedza kwakawanda kwekutangazve PC yako. Uye iwe haugone kusvika kune yako yekukiya skrini kuti ukwanise kupinda mukati uye kuenderera kunetsa PC yako, Izvo zvinoita kuti udaro gadzira yekuisa midhiya uye ita mamwe matanho ekumberi ekutambudza kugadzirisa nyaya.
Paunenge wagadzirira neInstall media, Insert it uye bhuremu system yako kubva kuisheni midhiya.
Darika chidzitiro chekutanga uye pane inotevera skrini, sarudza Gadzira komputa yako sarudzo inowanikwa pakona yezasi-kuruboshwe
Sarudza Dambudziko , ipapo Yepamberi sarudzo .
Sarudza Otomatiki kugadzirisa , uye sarudza tarisiro OS, Windows 10
windows 10 marongero asiri kuvhura 2019
Kubva pano Windows inomhanya otomatiki kugadzirisa iyo inozotarisira yako nyaya. Pakati peichi chikamu chekuongorora, Kugadzirisa Kwekutanga kunotarisisa system yako uye kuongorora marongero akasiyana siyana, sarudzo dzekumisikidza, uye mafaera ehurongwa sezvo ichitsvaga mafaira akaora kana kumisikidza marongero ekugadzirisa. Paunenge wapedza, reboot system yako uye tarisa panguva ino windows yatanga zvakajairwa.
Vaka zvakare Master Boot Record (MBR)
Kana kutanga kwekutadza kwakundikana kugadzirisa nyaya, saka ngativakezve Master Boot Record (MBR) Iyo iine ruzivo nezve uko Windows inogara pane yako hard drive uye inobatsira iyo kurodha mushe kana iwe wabatidza komputa yako. Kana izvi zvikashatiswa, zvinogona kutungamira mukukanganisa bhuti vhoriyamu kukanganisa.
Kuti uite izvi zvakare Access Advanced sarudzo kubva Kugadzirisa komputa yako> Dambudziko. Ino nguva sarudza Command Kukurumidza uye ita rairo “ bootrec / fixmbr “Izvo zvinogadzirisa Master boot rekodhi matambudziko.
Mukuwedzera wedzera bootrec / fixboot uye bootrec / rebuildbcd kugadzirisa mamaneja eBoot matambudziko uye Kuvakazve iyo Boot rekodhi.
Tarisa Disk Drive Zvikanganiso
Mushure mekugadzirisa Master Boot Record matambudziko, ngatiisei chkdsk raira nemamwe ma parameter kumanikidza cheki cheki cheki uye gadzirisa madhiraivha dhisiki. Pane imwecheteyo yekuraira yekukurumidza mhando kuraira chkdsk / f / r
Pano / F Inogadzirisa zvikanganiso pane diski uye / R Inotsvaga zvikamu zvakashata uye inowana ruzivo runoverengwa Uyezve iwe unogona kuwedzera / X iyo Inomanikidza vhoriyamu kubvarura kutanga kana zvichidikanwa.
Mushure mekupedzisa, iyo yekutarisa maitiro, restart windows uye tarisa ino nguva system yakatanga zvakajairika. Hakuchina imwe Isingaverengeki Boot Vhoriyamu Kukanganisa.
Bhutsu windows Mune yakachengeteka nzira
Zvakadaro, unoda rubatsiro? regai boot mumodhi yakachengeteka kuita mamwe matanho ekugadzirisa matambudziko. Safe Mode chinhu chakavakirwa chekugadzirisa matambudziko chinoremadza madhiraivhi asina basa uye zvirongwa panguva yekutanga kuita. Windows Safe Mode inotakura iyo sisitimu inoshanda ine seti diki yemafaira ehurongwa uye madhiraivha edhizaini - zvakaringana kubhootira iyo Windows OS. Mune Safe Mode, zvirongwa zvekutanga, zvinowedzera, nezvimwe, usamhanye. Zve windows 7 restart windows uye tinya F8 kiyi pakutanga uye sarudza yakachengeteka modhi bhuti. Verenga Maitiro ekubhowa Windows 10 uye 8.1 mu Safe Mode.
Paunenge uri pamamiriro akachengeteka tanga wabvisa mashandisirwo achangobva kuiswa ayo anogona kunge ari kukonzera kukakavara kunoguma Isingakundike Bhuti Vhoriyamu Kanganiso.
Simply pinda Windows + R, mhando netapp.wiz uye ok wobva wadzvanya kurudyi pane ichangobva kuiswa application uye uninstall ivo.
Yakaora isipo system system zvakare, dzimwe nguva inokonzeresa bhuruu rakakanganisika skrini, inosanganisira Isingaverengeki Boot Vhoriyamu Kanganiso Isu tinokurudzira kumhanya Sisitimu faira yekutarisa zvinoshandiswa zvinowongorora uye kudzoreredza zvisipo mafaira kubva pakamanikidzwa dhairekitori iri % WinDir% System32 dllcache .
Windows 10 Yakawedzera yekumhanya yekutanga chimiro kudzikisa iyo bhuti nguva, uye tanga windows nekukurumidza kwazvo. Asi ficha iyi ine zvayakaipira izvo zvinogona kukonzera iyi Blue Screen kukanganisa. Tinokurudzira Dzima kukurumidza kutanga uye tarisa dambudziko rakagadziriswa iwe kana kwete.
Zvakare dzimwe nguva junk, cache, system kukanganisa, Temp, junk mafaera kana zvakaputswa registry zvinyorwa zvinokanganisa akasiyana ekutanga matambudziko pane windows komputa. Tinokurudzira kumhanya yemahara system optimizer senge Kuchenesa Kuchenesa aya mafaera asina basa. Uye gadzirisa zvakaputsika zvisipo zvinyorwa zverejista.
Kana pasina mhinduro dziri pamusoro dzakakundikana kugadzirisa windows windows 10 kukanganisa kwescreen, Inguva yekushandisa iyo system kudzorera chimiro iyo inodzosera kumashure zvazvino masystem system kune yapfuura inoshanda nyika.
Mhinduro idzi dzakabatsira kugadzirisa iyo Isingaverengeki Boot Vhoriyamu Kukanganisa mukati Windows 10? Tiudzei kuti ndeipi sarudzo yakashanda iwe, Zvichakadaro unoda chero rubatsiro unzwe wakasununguka kukurukura pane zvakataurwa pazasi. Zvakare, verenga
iTunes Isingashande paWindows 10? Pano 5 Akasiyana iTunes matambudziko uye mhinduro
Ndeapi maHEIC uye HEIF Mafomati Mafomu uye maitiro ekushandura HEIC kuita jpg
11 basic marongero aunofanirwa kugonesa Kuchengetedza Windows 10 Laptop / PC
yekubatanidza nzvimbo yemunharaunda haina iyo inoshanda IP yekugadzirisa windows 10
windows 10 inotora zvachose kuvhara
peji kukanganisa munzvimbo isina kuiswa windows windows 10 kukwidziridzwa
USB wifi adapter inoramba ichibvisa windows 10
discord yakanamatira kutarisa kuongororwa
windows 10 mafoto anoramba achirovera
bvisa windows gadziriso yekuraira